Taorian'ny fampiasam-bolan'i Apple amin'ny Didi Chuxing dia mividy ny anjaran'i Uber any Shina | Avy amin'ny mac aho
Tamin'ny volana Mey lasa teo dia nandeha tany Chine ny tale jeneralin'ny Apple Tim Cook andramo ny famahana ny sasany amin'ireo olana natrehin'ilay orinasa tato anatin'ny volana vitsivitsy, amin'ny ampahany noho ny sivana ao amin'ny firenena. Na dia taorian'ny fitsidihana aza dia nitohy ny olana, satria na ny iBooks na ny sarimihetsika iTunes dia tsy naverina tafaverina, Tim Cook dia te-hanazava tsara ny fanoloran-tenan'ilay orinasa amin'ny famatsiam-bola 1.000 tapitrisa dolara amin'ny orinasa Didi Chuxing, ny Chinese Uber. Tamin'izany fotoana izany dia 28.000 miliara dolara ny tomban'ny orinasa.
Vao nifanaraka tamin'ny Uber China i Didi Chuxing tazomy ny tsena iray manontolo an'ity orinasa ity ao amin'ny firenena, ka mampihena ny fifaninanana. Aorian'ny fandidiana dia hanana 20% ny anjaran'ny orinasa Didi ny Uber, izay raha vao voamarina ny fividianana ny ampahan'ny sinoa Uber dia hitombo 35.000 1.000 tapitrisa dolara ny sandan'ny orinasa. Ankoatr'izay, Didi dia tsy maintsy mandoa Uber XNUMX tapitrisa dolara, ny vola mitovy amin'ny Apple izay nanambola volana vitsivitsy lasa izay tamin'ny fitsidihany ny firenena.
Na i Didi na i Uber dia samy very vola any Shina noho ny fisian'ny mpifaninana vaovao mahazo ampahany betsaka amin'ny tsena. Mba hiezahana hisoroka an'io toe-javatra io dia nividy ny orinasa Kuaidi, mpifaninana taloha Uber sy Didi teo aloha, i Didi tamin'ny zavatra azony ankehitriny taorian'ny fividianana Uber koa, nahazo ny anjaran'ny tsena 87%.
Ny antony mahatonga ny fampiasam-bolan'ny Apple ao amin'ny Didi, dia nitatitra i Cook stratejika sy ara-bola, milaza fa mbola laharam-pahamehana amin'izy ireo i Shina fa tsy ny hivarotra fitaovana fotsiny fa amin'ny firenena hampiasa vola amin'ny orinasa. Ny loharanom-baovao sasany dia milaza fa ny fampiasam-bolan'i Apple dia misy ifandraisany amin'ny tetikasa Titan, izay efa niasa nandritra ny fotoana kelikely ny Appel ary tsy hahita ny hazavan'ny masoandro intsony hatramin'ny 2021.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Taorian'ny fampiasam-bolan'i Apple amin'ny Didi Chuxing dia mividy ny anjaran'i Uber any Shina ny orinasa
Apple mandefa beta fahaefatra an'ny macOS Sierra ho an'ny mpamorona